Immisa maaddo ayey tahay inaad ka gudubto si aadan dib ugu soo celin deeqda waxbarasho? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 28/05/2021 23:03 | Deeqda waxbarasho
Markuu ardaygu dalbado deeq waxbarasho, badanaa waxay si taxaddar leh u akhriyaan aasaaska wicitaankan. Sidan, waxay soo bandhigaysaa dukumintiyada la xiriira muddada ku jirta ka shaqeynta codsigaaga. Marka dhammaan habraacyada la fuliyo, codsadayaashu waa inay sugaan daabacadda qaraarka.
Helitaanka deeqda waxbarasho ma aha oo kaliya inay bixiso waxtar, maaddaama kaalmadan lacageed ay bixiso taageero si loo daboolo kharashyada waxbarashada. Tirada deeqaha waxbarasho maahan kuwo aan la koobi karin, sidaa darteed, helitaanka gargaarka ayaa sidoo kale mas'uuliyad ka leh.
1 Soo celi lacagta deeqda waxbarasho haddii ay dhacdo u hogaansanaan la'aan
2 Immisa maaddo ayey tahay inaad ku aflaxdo si aanad ugu soo laaban deeqda waxbarasho ee MEC?
Soo celi lacagta deeqda waxbarasho haddii ay dhacdo u hogaansanaan la'aan
Ballanqaadka waxbarashada ayaa fure u ah gaaritaanka ujeeddooyinka waxbarasho ee koorso kasta. Ujeeddooyinka loo qaabeeyey macnaha mawduuc kasta. Waxaa jira su’aal ay ardaydu isweydiiyaan markay codsanayaan deeq waxbarasho. Immisa maaddo ayey tahay inaad ka gudubto si aadan dib ugu soo celin deeqda waxbarasho? Tani waa su’aal ay tahay in lagala tashado qaab shaqsiyeed, maxaa yeelay nooc kasta oo deeq-waxbarasho ah wuu ka duwan yahay oo wuxuu leeyahay shuruudo kala duwan. Qaabkan, akhri saldhigyada wicitaanka si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan qodobbada isku mid ah. Iyo, mar labaad, waxaad la xiriiri kartaa cidda qabanqaabinaysa si aad u xalliso wixii su'aalo ah ee arrintan la xiriira.
Su'aashan waxaa loo soo bandhigi karaa qaab kale. Ardaygu waa inuu ka gudbaa tiro cayiman oo dhibco ah si uu u ilaaliyo deeqda waxbarasho. Waa in la tilmaamaa in ardaygu mar labaad codsado gargaarka koorsada xigta. Si kastaba ha noqotee, haddii kaalmadan la bixiyo waxay ku xirnaan doontaa natiijooyinkaaga waxbarasho.
Ujeedada deeqda waxbarasho waxaa loogu talagalay ujeeddo gaar ah. Maaddaama tirada deeqaha ay kooban yihiin, tirada codsiyadana ay badan karaan, waxaa jira hanaan qeexaya cidda ka faa'iideysan doonta deeqahaas. Waxay noqon doonaan kuwa buuxiya shuruudaha lagu dejiyay saldhigyada. Si kastaba ha noqotee, Haddii inta lagu guda jiro koorsada ardaygu jebiyo waxa lagu aasaasay qaar ka mid ah xaaladahaas, wuxuu ku dhacayaa fulin la'aan. Iyo, xaqiiqdaani sidoo kale waxay leedahay cawaaqib xumo la xiriirta deeqda waxbarasho.
Immisa maaddo ayey tahay inaad ku aflaxdo si aanad ugu soo laaban deeqda waxbarasho ee MEC?
Sababta ay shirkaddu isugu yeeri karto ay uga dalban karto codsadaha inuu soo celiyo deeqda waxbarasho ayaa lagu sheegay in kaalmada aan loo isticmaalin ujeeddadii loogu talagalay. Tani waa wax ku dhici kara xaalado iyo xaalado kala duwan. Ku Deeqaha waxbarasho ee MEC waxaa bixiya Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababarka Xirfadaha. Ujeedada ugu weyn ee deeqdan ayaa ah in lagu dhiiri geliyo taageerada waxbarashada. Ka-faa'iideystaha deeqdan waxbarasho waa inuu soo celiyaa qadarka la helay haddii, tusaale ahaan, uu sii wado inuu joojiyo isqorista xarunta jaamacadda. Maaddaama uu go'aankani calaamad u yahay isbeddel ku yimid mashruucii noloshiisa tacliimeed.
Laakiin sidoo kale way dhici kartaa in kasta oo dadaalka iyo waqtiga waxbarashadu socdaan, haddana ardaygu uusan awoodin inuu dhaafo tirada maaddooyinka loo baahan yahay si uusan dib ugu soo celin kaalmada. Ardaygu waa inuu ka gudbay boqolkiiba 50 dhibcaha ay ku qoreen. Xogtan waxaa lagu qeexay 40% markay tahay xirfadaha sayniska.
Markii la sheegay in gargaarka la helay si loo fuliyo mashruuca shahaadada ugu dambeysa, oo aan loo soo bandhigin taariikhda loo qorsheeyay, ardaygu waa inuu sidoo kale sii wadaa inuu soo celiyo lacagta la helay. Lacag celinta ayaa sidoo kale la fulinayaa markii la sheegay in kaalmadu aysan la jaan qaadi karin deeq waxbarasho oo kale.
Sidaa darteed, aad ayey muhiim u tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato macluumaadka laga heli karo wicitaanada kala duwan ee deeqaha waxbarasho si ay uga shaqeyso arji. Laakiin sidoo kale waa muhiim inaad aqriso shuruudaha ku lug leh aqbalida deeqda waxbarasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Jaamacadda » Deeqda waxbarasho » Immisa maaddo ayey tahay inaad ka gudubto si aadan dib ugu soo celin deeqda waxbarasho?